के नेपालमा पनि नयाँ शक्ति चाहिएको हो ? – tistung deurali
के नेपालमा पनि नयाँ शक्ति चाहिएको हो ?
Posted on February 8, 2015 June 2, 2015 by tistung
नेपाल साप्ताहिकको अंक ५८७ (२ चैत्र २०७०) मा प्रकाशित मासिक स्तम्भ टिस्टुङ् देउरालीको लेख “नयाँ शक्ति कि नयाँ शक्तिहीनता ?” को अंश । पुरा लेख पढ्न यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ।
हामीलाई चाहिएको केवल नयाँ होइन कि सिक्ने-सुध्रिने पद्धति हो। हामीलाई चाहिएको ठूलो होइन, सानो हो, नायक होइन कि साधारण व्यक्तिको असाधारण सुझबुझ हो। हामीले चाहेको खुसी सायद सानो आचरण र मनस्थितिको परविर्तनबाट सुरु हुन सक्छ, न कि व्यवस्था परविर्तन वा सम्पूर्ण राज्यशक्ति हस्तान्तरणबाट।
नेपालमा युवाले राजनीतिमा अवसर नपाएको देशभित्र र बाहिरसमेत चर्चाको विषय हो। युवाकै नाममा राजनीति गर्नेहरूले संस्थागत रूपमा गरेका गुन्डागर्दी र विकृतिले आशा र वास्तविकताबीच ठूलो खाडल रहेको देखाइरहेकै छन्। तर, युवा शक्तिले अवसर नपाएर यस्तो भएको र अवसर पाउँदा सबै ठीक हुने तर्क तिनको रहिआएको छ।
यसै आशालाई मूर्त रूप दिन हामीले कहिले नयाँ पार्टीलाई सत्तामा परीक्षण गर्न पठाएका छौँ त कहिले पुराना पार्टीकै अपरीक्षति नेताहरूमाथि सम्पूर्ण भरोसा गरेका छौँ भने कहिले युवा नेतालाई स्थान दिन जोडदार माग गररिहेका छौँ। कहिले सम्पूर्ण व्यवस्था नै फेरेर नयाँ व्यवस्था ल्याए मात्र नेपालको भलो हुन्छ भन्नेहरूका पछि लागेका छौँ त कहिले व्यवस्था त ठीकै छ तर नयाँ शक्ति भने चाहिएको हो भन्नेहरूलाई पत्याएका छौँ। धेरै नेपालीले बारम्बार महसुस गरेको यस्तो नयाँ शक्ति वा नयाँ पार्टी वा नयाँ व्यवस्थाले मात्र हाम्रा समस्या समाधान होलान् त ?
नयाँ शक्तिको चाहनाकै क्रममा अहिले भारतको आमआदमी पार्टीको सफलताले हामीलाई फेरि हौस्याएको छ। हामी फेरि कुनै नयाँ पार्टी वा शक्तिलाई सबै जिम्मेवारी सुम्पिन पाए हाम्रा समस्या समाधान होलान् भन्ने पुरानै गल्ती दोहोर्‍याउन तयार भएर बसेका छौँ। हाम्रो यो मनस्थिति बुझेकाहरू पनि हामीलाई यसै मौकामा फसाइहाल्न उद्यत बनेका छन्। आफूलाई निकै महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य ठान्ने यस्तो प्रवृत्ति शक्तिमा एकछत्र हिस्सा चाहन्छ। चाहे पुरानो होस् वा नयाँ, कुनै पनि बहानामा आफूले सम्पूर्ण शक्ति र बागडोर पाए मात्र नेपालीको उद्धार हुने सोचाइ राख्छ। यस्तो प्रवृत्ति देखिने र चिनिने रूपमा हाम्रैअघि उपस्थित छ। खासमा पहिले हामीले धेरै पुरस्कृत गरेको भएर आज उसलाई फेरि यो हौसला मिलेको हो।
पहिले निरंकुश शासन र हिंसाका कारण अप्रिय कुरा गरेकै निहुँमा मारिनुपर्ने त्रास थियो। यसले हामीलाई बहस, आलोचना र लोकतान्त्रिक विचार निर्माण गर्न वञ्चित गर्‍यो र आफूलाई चाहिएको शक्ति पहिचान एवं विकास गर्न दिएन। अब त्यो वातावरण रहेन। तर, परिस्थिति बदलिए पनि पुरानै धङधङीबाट ग्रस्त प्रवृत्तिहरू हानि गर्न पाइने मौका कुरेर बसिरहेजस्ता देखिन्छन्। लोकतन्त्रको आधारभूत शक्ति सन्तुलन नै आफ्ना निम्ति बाधक रहेको भन्नेहरू पहिले नेपाली जनताजत्तिको चेतनास्तरमा आइपुग्नुपर्‍यो। यसका लागि सर्वप्रथम जनतालाई कमजोर सोचेर आफू नेपालीको एक मात्र नायक र उद्धारकर्ता रहेको भ्रमबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्त भएको राम्रो।
आजको समाज आफ्नो विकासका निम्ति कुनै नायक वा शक्तिशाली संगठनकै भर पर्नुपर्ने बाध्यताको सिकार छैन। अति साँघुरिएको विश्वपरविेशमा कुनै एक व्यक्तिले सिंगै देशलाई आफूले भनेको बाटो र पूर्वनिर्धारति योजनामा अन्धरूपमा डोर्‍याउन अब सम्भव पनि छैन। अति अन्तरसम्बन्धित बनेको विश्वमा अवसर र अराजकता दुवैका स्रोत स्थानीयजत्तिकै धेरै बाह्य पनि छन्। यस्तोमा सबै समस्याको समाधान एक्लै दिन सक्छु भन्ने आत्मविश्वासको हामी प्रशंसा त गरौँ तर भरचाहिँ नपरौँ। भर परौँ त आ-आफ्नै सिकाइ, अनुभव र क्षमताको, स-साना तर छरिएर रहेका अभ्यास, काम, व्यक्ति र शक्तिको।
यो देखिने प्रकारको प्रवृत्तिका अलावा उस्तै खालको अर्को प्रवृत्ति नदेखिने रूपमा हामीभित्र पनि छ। युवा-सरकार, नागरिक-सरकार, कर्मचारी-सरकार वा पेसागत-सफलता पाएकाहरूको सरकारलाई शक्ति जिम्मा लगाए सबै ठीक हुन्छ भन्ने विचारका रूपमा। त्यसैले हामी फेरि होसियार हुनुपर्ने बेला आएको छ।
अझै धेरै पार्टी वा शक्ति हुनु आफैँमा नराम्रो होइन। यसले हाम्रा विकल्पहरू बढाएर फाइदै गर्छ। तर, लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्न एउटा सिन्को नभाँचेका, बरू लोकतन्त्र संस्थागत हुन नदिने र पाएसम्म मास्ने कार्यलाई नै आफ्नो पेसा बनाएका राजनीतिकर्मीलाई हामीले भन्नैपर्ने हुन्छ कि, हामीलाई चाहिएको कसैको निम्ति अझै धेरै शक्ति होइन, बरू शक्तिको अभाव हो। सक्छौ भने शक्तिबिना नै गर्न सकिने साना काम गरेर देखाऊ, नेपालका असंख्य समस्यामध्ये कुनै एउटा रोजेर आफूलाई प्रमाणित गर। तर, तिम्रो शक्तिको भोकका निम्ति हामी फेरि आफ्नो समय, अवसर र स्रोत बर्बाद गर्ने पक्षमा कदापि छैनौँ।
सबै कुराको समाधान नयाँ हुँदैन। नयाँ नयाँ भन्दै हामीले करबि करबि सबै विकल्प परीक्षण गरसिकेका छौँ। अहिलेको आवश्यकता झन् धेरै शक्ति होइन कि सकेसम्म कम शक्ति हो। हामीलाई चाहिएको केवल नयाँ होइन कि सिक्ने-सुधि्रने पद्धति हो। हामीलाई चाहिएको ठूलो होइन, सानो हो। हामीलाई चाहिएको नायक होइन कि साधारण व्यक्तिको असाधारण सुझबुझ हो। आफूले फालेका सबै तुरुपहरू परविर्तनको चाहनामा धेरै धोका खाएका नेपाली जनताले टुलुटुलु स्वीकार्छन् भन्ने सोच्नेहरूलाई दिनुपर्ने सन्देश यही हो।
Posted in nepal, politics, south-asiaTagged aam aadmi party alternative party democracy local election Nepal new force politics youth
← संविधान निर्माणको वास्तविक समस्या: महेन्द्र राष्ट्रवाद कि माओवादी राष्ट्रवाद ?
AAP’s victory and takeaway lessons for Nepal →
One thought on “के नेपालमा पनि नयाँ शक्ति चाहिएको हो ?”
Pingback: AAP’s victory and takeaway lessons for Nepal | tistung